Panjakana fitsarana any Alemaina - dalana fifamoivoizana lalàna - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Panjakana fitsarana any Alemaina - dalana fifamoivoizana lalàna
Berlin sy ny Lokanga hizara iraisana fitsarana
Lovia amin'ny ho Alemaina faritra sasany, dia antsoina hoe fahefana, mizarazaraNy olon-tsotra Fahefana, ny fahefana ara-bola, asa fahefana, ny social fahefana sy ny fahefana ara-panjakana. Lovia latsaka ao amin'ny sokajy farany, matetika ampiasaina rehefa misy ady dia miseho noho eo ny olom-pirenena sy ny asam-panjakana.
Ny marimarina kokoa, Ny ny vahoaka ny lalàna ny fifandirana, izay tsy voatendry ara-Tsosialy na ara-bola fahefana namoaka: tany amin'ny fitsarana ara-panjakana.
Tari-dalana ity dia milaza aminareo ny momba ny asa ho an'ireo fitsarana, dia nampahafantatra azy ireo ny toe-javatra isan-karazany sy ny momba ny sasany ny fitsarana, ohatra izay voatendry ho amin'ny lalànan'ny fifamoivoizana. Tsy ny kely indrindra amin ny rehetra, dia hahazo eto ny lisitry ny adiresy sy ny telefaonina isa ny rehetra ny ambony ara-panjakana ny fitsarana ao Alemaina. Araka ny efa voalaza, mandray anjara amin'ny fitantanana ny fitsarana amin'ny vahoaka ny lalàna ny fifandirana. Ao ambadiky ny mifanaraka Fitarainana momba ireo olom-pirenena izay mahatsapa ny fihetsiky ny manam-pahefana ara-panjakana, ny zo efa nandika matetika. Asa natomboky ny manam-pahefana, ka azo inoana kokoa ho an-kanavaka.
Misy ny sasany ohatra, izay dia natao mba hanehoana ny vokany, dia ny samy hafa isan-karazany olana eo amin'ny tokan-tena ara-pitantanana fitsarana rehefa mandeha ny fotoana.
Toy izany koa ny lalàna dia nanokatra ny fitsarana ara-panjakana, ohatra, raha: Izany dia maneho fa amin'ny sehatry ny lalàna, izay ny fitsarana ara-panjakana no resahana, tena samihafa tanteraka. Sekoly fampianarana lalàna, ny miaramila, ny lalàna, ny lalana lalàna, fifamoivoizana lalàna, ny polisy ny lalàna, lalàna momba ny tontolo iainana, ary fialokalofana ny lalàna, afa-tsy manan-danja ny sasany ohatra. Farany dia nitarika ho amin'ny mpitsoa-ponenana ny toe-draharaha ao amin'ny lohataona ny taona, ny Berlin fitsarana ara-panjakana tonga ny famakiana teboka. Toy ny hafa ny olona, ao Alemaina ny fahefana ara-panjakana telo narafitra dingana.
Ho fitarainana tany amin'ny voalohany, ohatra, ny anaran-fanomezana Administrative fitsarana mba ho atolotra.
Ireo efi-trano, izay nipetrahan'ny telo mpitsara sy roa boninahitra mpitsara. Ny tranga dia tsy nanapa-kevitra iray tokan-tena ny mpitsara, dia ny efi-trano tompon'andraikitra.
Eto azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny foto-kevitra
Ny voampanga na ny mpitory ny fitsarana ny mahay ny raharaham-panjakana tsy afa-po amin'ny fitsarana, dia mety hahaliana ny Fanitsiana na mitovy fanafody. Amin'ity tranga ity, noho ny Famerenana amin'ny alalan'ny ohatra faharoa ny mpanao raharaham-panjakana fitsarana.
Ny sasany amin'ireo zavatra länder mampiasa ny teny hoe ara-panjakana ny fitsarana.
Ambony ara-panjakana amin'ny fitsarana, afa-tsy anankiray ihany, ao amin'ny fanjakana rehetra. Sasany ny lafiny ara-panjakana ny lalàna dia voafehin'ny fitsarana ara-panjakana, na dia ao amin'ny ambaratonga voalohany. Ireo fitsipika ireo dia ahitana indraindray ny fanaraha-maso ny fomba fiasa.
Izany, ohatra, ny disadisa eo ny ataon ny drafitra fampandrosoana sy ny fototra ara-teknika large-scale tetikasa, dia ny fanapahan-kevitra ny mahay ambony ara-panjakana amin'ny fitsarana.
Mifanohitra amin'ny ara-panjakana navoakan'ny fitsarana ao amin'ny ambaratonga voalohany, miara-miasa amin'ny efi-trano, namorona ambony ara-panjakana amin'ny fitsarana Senates. Ny fahatelo sady farany ohatra, dia variana ny Federaly ara-panjakana ny fitsarana. Izany no tany Leipzig tamin'ny sezany ary heverina ho toy ny fitsarana ambony. Ny tranga iray dia mety ho alohan'ny ny Federaly ara-panjakana ny fitsarana ambaratonga voalohany tamin'ny fifampiraharahana. Ny fitaterana ny olana ara-pitsarana farany foana indray amin'ny mahay ny raharaham-panjakana fitsarana. Izy io dia tsy fahita firy ny mpampiasa lalana ka maha-tsy ara-drariny tsaboina sy ho hentitra voasazy mahatsapa. Misy ohatra roa toe-javatra izay mampiseho ny fomba ny rafitra ara-panjakana ny fitsarana eo amin'ny toe-javatra toy izany dia mety ho ny mpitsara. Eo anoloan'ny fitsarana ara-panjakana ny Neustadt, dia tonga amin'ny taona ny miavaka ny fiarovana milaza (Az. Teo aloha, ny mpangataka dia niala vokatry ny Amphetamine mampiasa ny fitateram-ny fahazoan-dalana mamily. Ny toxicology tatitra izay nanamafy ny filazana Ireo manampahefana, fa nisy ny fampiasana zava-mahadomelina tao amin'ny kodia. Haingana ny zava-ny fangatahana vonjimaika didy ny mahay ny raharaham-panjakana fitsarana.
Tamin'ny volana Martsa taona, ny fitsarana ara-panjakana ao Mainz namoaka didy izay antsoina hoe ny mpamily kamiao, ny fandaharana ny fitaterana ny fahefana (Az. MZ).
Eo amin'ny tranga maro ny fandikan-dalàna momba ny voalaza fiara fotoana sy ny vanim-potoana sisa dia efa fantatra.
Ankoatry ny tena tsara, dia nahazo antso izay dia tokony handeha manoratra angon-drakitra ho an'ny volana lasa.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny mpamily kamiao nitaraina rehefa tsy nahomby ny mpanohitra fitsarana.
Nanamarika izy fa ny ota no fitondran-tena teraka avy miasa Toe-javatra, ary izany dia tsy ahiana ho eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa lasa mitaingina tokony hitsangana. Ny fitsarana dia nanapa-kevitra, na izany aza, fa ny tanjon ny fitaterana ny fahefana. Ny fototry ny milaza, dia hita ao amin'ny fiara manokana hanao zavatra.
Araka izany, no ara-dalàna, eo amin'ny hitolo-batana mba ahitana ny antontan-taratasy izay manao azy izay azo atao ny mijery ny miantoka ny fiarovana ny fifamoivoizana.
Ankoatra izany, ny filazana dia heverina ho toy mifanaraka, satria ny tahirin-kevitra dia tsy maintsy efa ho, ary ho an'ny taona foana ao. Ity tabilao manaraka ity dia manome Topimaso ireo niasa tany Alemaina manana ny ambony ara-panjakana ny fitsarana. Lisitry ny anarana, ny adiresy sy ny telefaonina isa ny olona iray vilia. Inona mihatra amin'ny asa nentina teo anoloan'ny fitsarana ara-panjakana. Inona no fototra araka ny lalàna Manjaka ao amin'ny fitsarana ara-panjakana ny filaza mandidy ny adidy hamela ny tenany ho ohatra amin izany ny mpisolovava. Ao amin'ny Tuning koa fomba maro mba tint ny fiara Windows. Na izany aza, Tuning mety tsy tahirin-tsirin'i na inona na inona ny Mpankafy rehetra ny Windows ny fiara amin'ny foils. Inona avy ireo fitsipika ara-dalàna mila mandinika sy ny fomba ny fiara Windows afaka feo, vakio ny Tuning mpitari-dalana. Tsy Mpamily, nefa ihany koa ny fifamoivoizana mpandray anjara amin'ny bisikileta dia afaka haingana latsaka ao ny andraikitry ny fanahy mpitaingina azy. Toy ny kodiarana, fitsipika sasany mampihatra ny hanana ny momba izay lafiny amin'ny lalana na inona bisikileta lalana. Fa inona no mitranga rehefa ny mpitaingina bisikileta tsy firaharahiana ireo ny fitsipika sy ny fanahy mpamily. Tamin'ny taona, ny voalohany dia momba ny tontolo iainana faritra, mba hampihenana ny fandotoana ny rivotra iainana amin'ny oxides ny azota sy ny tsara vovoka. Ireo mpitondra kodiaran-droa miditra na izany aza anefa, ny fiarovana ny tontolo iainana faritra tsy misy na diso karatra, dia afaka ny ho saziana. Vakio bebe kokoa eto, inona no fiantraikany izany amin'ny ratsy marika famantarana. Haingana, izany dia mitranga amin'ny ramps amin'ny mampisafotofoto lalambe na noho ny mpamily an-jambany matoky ny Navi, ianao hiafara amin'ny lafiny ratsy ny lalana.
Ianao dia ho toy ny Masina mpamily teny an-dalana ho an'ny rehetra Tafiditra ao amin'ny Toe-javatra mampidi-doza.
Mianatra eto ny fomba hahitana ny tenanao amin'ny Toe-javatra toy izany, tsara fitondran-tena. Hira-ary-mihazakazaka eo amin'ny lalànan'ny fifamoivoizana lehibe ny fanafintohinana, dia nofaizina araka ny fepetra ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Saingy mitovy ihany ny sazy dia mihatra ihany koa ny fahaizana mpamily izay manana ny fahazoan-dalana hitondra fiara mbola santionany. Eto ianao dia hianatra ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny foto-kevitra. Tao anatin'ny loza tatitra fanompoana ny fiara insurer ny loza tatitra plug-tany efa mandroso. Dia manazava ny fomba miasa izany ary na ihany koa ny mety ho ampiasaina amin'ny tranga iray ny faharatsiana. Isika ihany koa handeha any ny fiainana manokana ny ny loza, ny tatitra connector. Mpamily kamiao dia tsy mahazo mifindra any Alemaina na oviana na andro na oviana na oviana ny mavesatra fiara. Maro ny fandraràna familiana fiara ho an'ny kamiao izay tokony ho lazaina raha tianao ny tsy handray ny sazy an-tsoratra. Fa tsara raha ny Fiara dia tsy maintsy mijanona. Ny mianatra eto.
Pahaizana manokana mpahay lalàna ho an'ny heloka bevava ny lalàna - ny antso amin'ny lalàna momba ny heloka bevava manohitra ny fitsarana
কিভাবে দিতে গাড়ির ট্যাক্স ছাড়া একটি প্রাপ্তি. কি হবে যদি একটি প্রাপ্তি নষ্ট হয়